Aqoonkaab Finanka kaa so yaca wajiga waxay ku ku sheegayaan digniino caafimaad. | Aqoonkaab
Finanka kaa so yaca wajiga waxay ku ku sheegayaan digniino caafimaad.
Jul 08, 2015Caafimaadka
dhaqanka aduunka dawada jayniiska,waxay aaminsanyihiin inaad wajigaaga ku aragto finan waxay ka turjumaysaa xaalad caafimaad oo qayba jidhkaga ah haysata .ciladan oo wajigaagu so bandhigo finan.
Fooda sare .waxaa ku haysa ta cilad dheefshiid iyo kaadihaysta oo bukta.
hadad finan ku leedahay qaybaha dare ee fooda waxa ku haysta cilado cunto xumo m cab biyo badan coffee si sunta alkaa ku fadhiisatay uga baxdo
Qaybta hoose fooda ,wadaha
waxalaga yabaa inaad leedahay mukliad xaga wareega dhiiga ah .hadad isku aragto finan xaga hoose fooda .isku day inaad ka fogaato cidhiidhiga nolosha .ujimicso si joogta ah cun cunto ay ku badantahy kudaartu .waxa sido wanaagsan inaad iska joojiso sigaark hadaad ciladaa isku aragto iyado markastaba aanu wanaagsanayn .
Dhagaha .kalya xanuun.waxaa hubaaltiya in kalyahaagu halis ku suganyihiin inan gutaan shaqdodi hadad ku aragto dhagahaaga finan .iska yareey cuntada milixdu ku badantahy iyo coffee .cabna biyo badan.
Indhaha inta udhaxaysa suuniyaha .
hadaad finan ku aragto inta udhaxaysa suuniyaha iyo labada indhood waxay ku tusinaysaa inu beerkaagu ubaahanyahy caawimo .ka fogoow khamriga iyo cunooyinka macmacaanka ee xiliga danbee habeenkii aad cunto ,iskuday inaad caado ka dhigato xadi badan oo khudaar ah +vitamin C.waxay kaa caawinayaan in suntii badhaxdo
Daamanka sare .Cilad neefqaadasho.
hadaad finan ku aragto labadaada daan ee sare waxaad ubaanahtahy inaad si wacan u ilaalisid sanbabadaada .jooji sigaarka .kana fogow hawada wasakhaysan .waxaad ku xoojinkarta habkaaga neef qaadashada adigo qabta jimicsi.
daamanka hoose .waxaa laga yabaa inaad leedahay mushkilad dhanka afka ah .marka damankaaga hoose leeyihiin finan badan .si joogta ah u cadayo.cun khudaarta Vitamin C da
Qoorta iyo laabta.habka difaac ee jidhka. finan ka so yaaca shafka iyo qoortu waxa sheegyaan inaad ku jirto xaalad difaac xanuun.habka difaacaga jidhkuna wuxu isku dayayaa inuu la dagaalamo xanuunka so galay .waqtigan cun cuno badan oo Vitamin C ku badantahy waxay kor uso qaadaysaa difaacaga jidhka.
–Bilaal axmed cige–
Previous Post5 Arrin oo kor uqaadaaya Caafimaadka Maskaxdaada. Next PostDucadii Nabi maxamed ku ducaysan jiray habeenada laylatul qadriga,.
One thought on “Finanka kaa so yaca wajiga waxay ku ku sheegayaan digniino caafimaad.”
Maxamed May 30, 2020 at 2:46 pm
Waxa iga soo Baxa finan wajiga wliba xaga sare ama sujuuda way igu soo now noqodaan waxaan rabaa inaad iga caawiso